Maaraynta faylka – Bogga 2 – Windows – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaBogga 2
Maamulaha fog – barnaamij softiweer ah ayaa fuliya howlo kala duwan oo leh nidaamka faylka. Software-ka wuxuu ka caawiyaa shaqada ay hayaan adeegayaasha FTP wuxuuna siiyaa fursado ku filan oo looga shaqeeyo shabakada.
EaseUS Todo PCTrans – waa barnaamij lagu wareejiyo xogta iyo softiweerka hal kombuyuutar loona wareejiyo kombiyuutarka maxalliga ah ama abuurista sawir faylka.
GoodSync – softiweer si aad ula shaqeyso xogta udhaxeysa kumbuyuutarkaaga iyo aaladaha kale. Sidoo kale, waxay taageertaa taakuleyn ku saabsan server-yada kala duwan.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu xereeyo faylasha iyo faylasha shakhsi ahaaneed iyada oo aan loo baahnayn in la xoojiyo dhammaan dariiqa adag.
Nadiifinta Diiwaangelinta Avira – waa qalab nadiifiya diiwaanka kana soo galaya hadhaaga haraaga ah ee Avira ee lagu keydiyey nidaamka ka dib markii laga saaray agabkii ugu weynaa ee shirkada hababka dhaqanka.
Tani waa maamulaha feylasha oo taageera dhammaan hawlaha caadiga ah, ee ku jira FTP-macmiilka iyo hawlo badan oo dheeraad ah oo la shaqeeya faylasha iyo lataliyeyaasha.
McAfee Consumer Product Removal
Soo Saarida alaabada Macaamiisha ee McAfee – utility waxaa loogu talagalay in lagu dhejiyo kaabayaasha, xirmooyinka amniga iyo softiweeryo kale si looga ilaaliyo McAfee oo ay weheliso xogtooda harta.
G Data AVCleaner – softiweer waxaa loogu talagalay in looga saaro alaabooyinka loo yaqaan ’G Data antivirus’, kuwaas oo lama huraan u ah kiisaska Windows-ka caadiga ah ee bilaawda ama aan dhammaystirnayn.
Qalabka Ka Saarista eScan – utility waxaa loogu talagalay in gebi ahaanba lagu rakibo alaabada eScan antivirus-ka nidaamka. Softiweerku wuxuu baabi’inayaa dhamaan raad raacyada fayraska sida faylasha hadhaaga ah iyo galka diiwaanada.
Comodo Uninstaller – uninstaller wuxuu ka saaraa barnaamijyada sida Comodo Antivirus, Comodo Internet Security iyo Comodo Firewall oo ay ku jiraan faylalka hadhaaga ah iyo galka diiwaanada.